10 Asina chokwadi Anime Ane Sketchy Marezinesi MuMadokero - Zvimwe
10 Asina chokwadi Anime Nedzimwe Dzacho Sketchiest Marezinesi MuWestern Market
Yakaratidzwa mifananidzo kiredhiti: zerochan.net
Mazita mazhinji emazita ane marezinesi uye anobva akanganikwa nezve vamwe vachitoenda vasina marezenisi kunyangwe zvichidiwa uye kufarirwa. Ichi chinyorwa chinotarisa gumi emarezinesi ayo parizvino asina chokwadi pamusika weWestern.
1 - Kongiri Revolutio
Mufananidzo Unobva: Yepamutemo Webhusaiti
Inobvumidzwa neFUNimation chinguva kudzoka, hatina kuzonzwa chero chinhu pamusoro peiyi zita kubvira payakapedza kuridza. Nepo FUNimation yakatora nguva yayo kare uye yaigona kunzi haigone kubvumidza munhu ane rezinesi ivo yavakabhadhara mari yakanaka kuti ingomira, zvinoita sezvisinganzwisisike kuti hapana kufambira mberi kwakaitwa kwezita iri, zvachose.
Pamwe iro divi reJapan rezvinhu rakabata kuburitswa asi chinhu chimwe ndechechokwadi, iyo nguva yekuburitswa kweConcrete Revolutio inoita kunge iri kupera.
Yakanyanya kufuratirwa kuMadokero, Gintama akazopedzisira agamuchira kuburitswa kwayo kwekutanga mukati medunhu reWestern apo Sentai Filmworks yakaburitsa episheni makumi mana nepfumbamwe paDVD yakadomwa muna 2010 na2011.
Pakupedzisira, iyo bhaisikopo rine hupenyu raizoonawo kuburitswa, ino nguva yakapihwa zita muChirungu, naSentai; asi kubva ipapo ivo havana kuburitsa imwe yeGintama chivakwa. Zvakachengeteka kufunga kuti kodzero, iri muhurongwa hwaSentai, yafa. Asi zvino tariro yakamutsiridzwa nguva pfupi yadarika kune vateveri apo Crunchyroll paakatanga kuburitsa yakatumidzwa zvikamu zveakateedzana uyezve FUNimation yaita kuburitswa kweDVD / BD kwechikwata chechangobva kuitika chezvikamu zvakare.
Saka dambudziko nderei? Dambudziko nderekuti Funimation inongoburitsa zvikamu kubva kune ekupedzisira mativi akateedzana, kwete kutanga.
Saka ikozvino tave nezvikamu zvinodarika zana izvo Crunchyroll akabvuma kuti haana kodzero, tinogona kungofungidzira nekuda kwaSentai akabatirira rezinesi ravasiri kushandisa zvekare, vasina zano rekuti vangazodaidzwe here, ndoda kusunungurwa pane venhau venyama.
Pasina kutaura zvingangodaro chaizvo kusatombove nemari inofanirwa kuburitsa izvo zvikamu kunyangwe ichi chiri chinhu chete Crunchy naFuni vaizoziva panguva ino.
Mufananidzo Source: Yakatorwa kubva kuLyrical Nanoha TV nhepfenyuro
Ese maviri ekutanga uye echipiri mwaka weiyo franchise akapihwa marezenisi neGeneon Entertainment uye akaburitswa nedub pakati pekupera 2000s.
Kubva pakuparara kwemusika weanime kunyange zvakadaro, hapana kumwe kusimudzira kwakatevera iyo Nanoha franchise kumadokero. StrikerS, ese mwaka eVivid nemamuvhi anoramba asina kuburitswa panyama, ndoda dub, uye zvese zvatakabvumidzwa kuisa maoko edu pairi zviri pamutemo hova kune mamwe emazita aya.
Nefranchise ichiri kusimba chero chinhu chingaitika, asi nei pasina zvakadaro uye nezvinozoitika kune chero easina kuburitswa akateedzana uye mabhaisikopo chero munhu anofungidzira panguva ino.
Kune zvimwe zvekufungidzira kuti Aniplex inogona kuve yakabatanidzwa kunyangwe pasina humbowo hwekongiri kumberi uko. Radhi rimwe retariro ndiko kuburitswa kwemafirimu eNanoha yekumadokero inoita kunge inoratidza divi reJapan reindasitiri iri richiri kufarira mumusika weWestern.
4 - Fate / kareid liner Prisma ☆ Illya 3rei !! (Kana mwaka 4) + iyo Bhaisikopo
Sentai Filmworks yakapihwa marezinesi, yakapihwa zita uye yakaburitsa mwaka mitatu yekutanga yezviratidziro zvekuMadokero. Mwaka wechina uye iyo bhaisikopo haisati yaburitswa hazvo uye hapana izwi pamusoro peiri rezinesi raitwa.
Hazvina chokwadi kuti chii chiri kuitika neiyi franchise. Icho chikamu cheMugumo mukuru / franchise uye sezvo zvichidaro zvinoita kunge zvisingaite kuve zvisina basa kana kusiiwa.
Crunchyroll naSentai vanga vachirwira mazita nguva diki diki uye pamwe ndeye FUNimation, kuburikidza naCrunchyroll, izvozvi zvine mvumo yekupinda nyowani kweiyi franchise asi kana zvirizvo, sei vasina kutaura nezvazvo.
Ehezve, Funimation yaratidza kushomeka kwakanyanya kweruremekedzo kana zvasvika pamazita avanoburitsa kuburikidza nemamwe makambani sezvo isu taona shoma yambiro kuna Kabaneri weI Iron Fortress neRe: Zero. Kunyangwe hazvo imwe yakazosimbiswa kusunungurwa kwemuviri uye Re: Zero yakatoburitswa kuti ine dub mumabasa.
Panguva iyi, hapana izwi rekuti chii chichaitika nechero ramangwana basa rechikamu ichi chefranchise uye nguva yekupedzisira yemumwe munhu anozivisa kuti akabvumidza kuti iri kupera nekukurumidza.
5 - Phi-Brain Mwaka 3
Mufananidzo Unobva: Peji yaCrunchyroll yezvikamu zvakateedzana
Yese yekutanga mwaka wechipiri uye wechipiri wakaburitswa paBD uye DVD ine dub naSentai Filmworks asi izvo zvakadzoka muna 2013. Kubva ipapo, mwaka wechitatu uye wekupedzisira, kunyangwe uine rezinesi, hauna kuzomboburitswa kana kutaurwa nezvawo naSentai panyama mhizha.
Pamwe tinogona kufungidzira mwaka wekutanga uye maviri vanga vasingatengese zvakakwana uye saka vakasarudza kugara rezinesi asi iwe waizofunga vangadai vakaregedza zvakadaro kuti vadzorere mutengo.
Ehezve, Sentai akataura kuti chero chinhu chavanotanga kubhabhadzira vanozoona chero ramangwana rakateerana kana kurasa-gashira vanogashirawo dub uye nekudaro vangangodaro vakasarudza kuti kana mwaka wechitatu wanga usina kukodzera kudhibha, zvaive zvisina kukodzera kusunungura zvachose. Kunyangwe dub kana kwete, zvichiri kuita sekuda kuziva kuti Sentai paakaendesa mazita avo kubva kuAnime Network kuenda kuHIDIVE, mwaka wekutanga uye maviri akateedzana ese akatamisirwa pamusoro asi mwaka wechitatu havana.
Zvinoita kunge zvisingaite panguva ino kuti tichaona kuburitswa kwemusoro wezita iri munguva pfupi iri kutevera asi chinonyanya kutemesa musoro kuramba kwaSentai kugadzirisa vateveri pamamiriro ezvinhu.
6 - Rock Lee & yake Ninja Pals
Mufananidzo Unobva: TV Tokyo
Kudzoka muna2012, VIZ yakapihwa marezenisi, yakatumidzwa zita ndokuzotepfenyura Rock Lee neNinja Pals yake asi zvakasiyana nezvimwe zvivakwa zveNaruto franchise, haina kumboona kusunungurwa kwemuviri.
Kunyangwe Australia (Kubudikidza naMadman Varaidzo) yakaburitsa zita racho pavhidhiyo yekumba; kunyangwe chete paDVD.
Zvinotaridza kusanzwisisika kuti VIZ haina kumboita chero chinhu neichi, pamwe nhamba dzekushambadzira dzaive dzakaipa, asi panguva ino zvinoita sekunge kusunungurwa hakuzoonekwa, kana kwete kubva kuVIZ zvirinani.
7 - Boruto: Naruto Inotevera Zvizvarwa
Kupinda kutsva kunozivikanwa muNaruto franchise, Boruto, zvinoita sekune chokwadi chekuona kuburitswa kwepanyama pane imwe nguva. Asi, kushomeka kwechero ruzivo pane akateedzana kuri kunetsa.
VIZ inobata rezinesi reBoruto uye kodzero dzekuburitsa chaiko. Ipo ichiri kutepfenyurwa pari zvino paCrunchyroll, hapana nhau dzedub kana yevhidhiyo yemumba inoburitswa; kunyangwe kusimbiswa kwemapurojekiti akadaro ari mumabasa.
mitambo yekutamba uchitarisa anime
Kunyange isu takaona kuburikidza neFunimation yekubata kweDragoni Bhora Super uye VIZ kubata kwaHunter x Hunter iyo yepamusoro mbiri dzakateedzana dzinogona kuramba dzakanyarara kudzamara vagadzirira kuburitsa, inogona kuramba iri refu uye isina chokwadi kumirira vateveri.
Dai ndaifanira kubheja, chiziviso chingangoitwa chekuburitswa panyama mushure mekunge vapfuura episode 100 kana kana maShippuden DVD maseti apedza kuburitswa.
8 - Rova Varoyi: Mashandiro Ekukunda Museve
Iwo ese mwaka weStrike Varoyi uye bhaisikopo rakapihwa marezinesi, rakatumidzwa uye rakaburitswa neFunimation uye iyo nyowani Brave Varoyi akateedzana akatogashira dub uye anotoda kuvimbiswa kuona kuburitswa munguva pfupi iri kutevera. Asi ko izvo zveiyo 2014 OVA Kusevenzesa Kukunda Museve?
Funimation haina kana rezinesi kana kana kumbotaura nezveOVA uye neyakaenzana nhoroondo yavo neOVAs yemafranchise akasimbiswa pamwe nenguva yakadarika kubva kuburitswa kwayo, zvinoita kuti zvisave nechokwadi kuti tichazomboona kusunungurwa chaiko kwechikamu ichi chefranchise .
9 - Ropa +
Mufananidzo Sosi: Kugadzira IG yekushambadzira zvinhu
Iyo nhepfenyuro yakatanga kuratidzwa muna 2005 uye ndokuwana nzira yayo, yakatumidzwa, paAmerican TVs muna 2007. Yakabva yaburitswa paDVD mumavhoriyamu kuburitswa ayo anoramba asina kukwana kusvika nhasi uye akazoburitswa maviri, 25 episodes bhokisi maseti muna 2009.
Ose maviri seti aya haasisiri kudhindwa. Isu hatisati taziva kuti chii chichaitika neakateedzana: Kana ikazombodzoka, kana ikawana kuburitswa kweBD zvichingodaro… Asi naSony, uyo ane rezinesi, atenga Funimation, pamwe izvi zvinovhura zvitsva mikana yenguva yemberi iri pedyo; kana zvakadaro vateveri vanovimba.
10. - Mushishi: Chitsauko Chinotevera (Kana Mwaka 2)
Mushishi akapihwa rezenisi neFunimation, akatumidzwa uye akaburitswa muna2007 - 2008 mumavhoriyamu, uye mubhokisi rakaiswa muna2008 uye pakupedzisira, akarova SAVE Edition muna 2011.
Mwaka wekutanga zvakadaro, hauna kuzoburitswazve pane blu-ray uye zvinoita kunge zvisingaite kurapwa kwakadai munguva pfupi iri kutevera. Iyo Mushishi nhevedzano yakazoona yakazoteedzana 1 awa yakakosha (Hihamukage), akateedzana akateedzana (Chitsauko chinotevera) uye bhaisikopo (Kugadziridza arc yekupedzisira yeiyo manga); zvese izvo zvakapihwa marezenisi naAniplex asi hazvina kumboburitswa.
Kufanana nemamwe marezinesi ekare eAniplex, isu hatina kumbonzwa chero chinhu nezvazvo futi.
Pane imwe nguva, Madman Australia ainyora kuburitswa kwemwaka wechipiri uye airatidza kuti yaive nedub, asi iyi rondedzero yakabviswa mukati memazuva.
Nenguva yakawandisa yapfuura, Mushishi ari munhu asingafarirwe (kana kuti asingabhadhare zvakakwana kumakambani makuru kuti atarisire) franchise kumadokero uye nemasaini mazhinji anopesana nezvenzvimbo yelayisensi, chero munhu anofungidzira kana Mushishi wese achizombofa kusunungurwa.
Ndizvozvo, parizvino zvirinani. Kune mamwe mazita asingaverengeke mumamiriro ezvinhu akafanana uye pamwe ndichagadzira imwe chinyorwa pamusoro wenyaya pane imwe nguva. Asi ikozvino, ini ndoda kuenda kune akasiyana masitendi.
yakanakisa anime yausina kumbonzwa nezvayo
Semazuva ese, kana iwe uine ruzivo kana maonero pane anotevera mazita uye mamiriro avo, usazeze kupindura.
Ichi chinyorwa chakanyorwa naGabriel Persechino-Sango kubva Sakura Anime Nhau Blog.
5 Asina chokwadi Marezinesi (Chikamu 1)
5 Asina chokwadi Marezinesi (Chikamu 2)
yakanakisa anime magumo enguva dzese
chakanakisa chidimbu chehupenyu anime 2018
mukurusa anime akateedzana enguva dzese